Kooxda Arsenal oo Macallin Mikel Arteta u soo bandhigtay heshiis cusub… (Waa meeqa sano?) – Gool FM
(London) 23 Jan 2022. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo sheegayaa inay heshiis cusub oo labo sanadood ah u soo bandhigtay Macallinkeeda Mikel Arteta.
Tababaraha Kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa la soo warinayaa inuu haatan qarka u saaran yahay inuu qalinka ku duugo qandaraas labo sanadood ah oo uu ku sii joogayo garoonka Emirates.
39-sano jirkaan ayaa wax ka yar hal xilli ciyaareed ay ku qaadatay inuu Arsenal u gacan geliyo Koobka FA Cup-ka, laakiin xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ayuu kooxda keeni waayey meel ka sarreysta kaalinta siddeedaad ee horyaalka Premier League oo ay ku dhammaysteen.
Si kastaba ha ahaatee, Arsenal ayaa si adag ugu jirta u soo bixitaanka tartanka Champions League xilli ciyaareedkan, laakiin qandaraaska Macallinkan reer Spain ee Arteta waxaa uga harsan haatan kaliya 18 bilood.
Sida laga soo xigtay Wargeyska Daily Mail maamulka kooxda Arsenal ayaa ku qancay hoggaanka Macallin Arteta tan iyo markii uu bedelay Tababare Unai Emery, waxaana uu dhawaan kasban karaa heshiis kordhin labo sano ah.
Warbixintu waxa ay intaa ku dartay in Madaxda Arsenal ay si isku mid ah ula dhaceen maamulka Arteta ee garoonka dhexdiisa, waxayna aad ugu baahan yihiin inay meesha ka saaraan xiisaha uga imaanaya kooxdiisii hore ee Manchester City.
Macallin Arteta ayaa 112 kulan hoggaamiyey Kooxda Arsenal tartammada oo dhan, waxa uu badiyay 62 kulan, waxa uu barbaro galay 19 kulan, waxaana laga badiyay 31 ka mid ah kullamadaas.